UNgcobo usafuna ukuzinza kwiSwallows
UNJABULO Ngcobo usezakhele igama ngokuvimba kwasani kudonga lweSwallows FC. Isithombe: Gavin Barker/BackpagePix
ISIQONGQWANE sasemuva kwiSwallows FC egijima kwiDStv Premiership, uNjabulo “Roadblock” Ngcobo, sifuna ukuzinza kuleli qembu laseDube, ngaphambi kokucabanga ngamadlelo aluhlaza kwezinye izindawo.
UNgcobo ukhuluma ngalolu hlobo ngenxa yemibiko yakamuva yokuthi kunamaqembu amfuna uthuli kwiPremier Soccer League (PSL). Kulawo maqembu kuvele neKaizer Chiefs, okubhekwe ukuthi yenze izinguquko ezinqala esikwatini sayo ekupheleni kwesizini. IChiefs ayivunyelwe ukusayinisa abadlali kule sizini ngenxa yesigwebo seFifa.
Selokhu kuqale isizini ka-2020/2021, lo mdlali odabuka eFolweni ungomunye wabagqamile kwiSwallows. Useyigijime yonke imidlalo yeligi kwiZinyoni ezingakahlulwa kwiligi.
Ngempelasonto edlule uqokwe njengomdlali ovelele bebambana ngo 0-0 naMaZulu FC.
UNgcobo ujoyine iSwallows ecijwa nguBrandon Truter, esuka kuThongathi FC olugijima esigabeni seGladAfrica Championship. Usayine inkontileka yonyaka owodwa neZinyoni enombandela wokuyelula ngeminyaka emibili.
Ekhuluma neSolezwe ngemibiko emkhomba kwamanye amaqembu, uNgcobo uthe: “Indaba yokuthi kunamaqembu angifunayo kwiPSL ngike ngiyizwe emithonjeni yabezindaba. Ngingasho ukuthi nakuba kunjalo, kalikho iqembu eliseze kimina ngqo, noma ezikhulwini zeqembu ukukhuluma ngalolu daba. Ngaphezu kwalokho ngisafuna ukuqinisa indawo yami lapha kwiSwallows, njengoba kuyisizini yami yokuqala ngidlala kwiDStv Premiership. Ngikwazi ukuzinza kahle ngaphambi kokuthi ngicabange ngokudlala kwamanye amaqembu.
“Khona kuyajabulisa impela ukuzwa ukuthi kukhona amaqembu afisa ngiwadlalele, lokhu kukhombisa ukuthi ikhona into enhle engiyenzayo uma sengisenkundleni.”
USihlalo weSwallows, uDavid Mogashoa, ucashunwe kwabezindaba ethi okwamanje basagxile emidlalweni yabo yeligi ngakho-ke udaba lukaNgcobo lokuthi ucathanyelwa ngamanye amaqembu, bazolukhuluma kahle ekupheleni kwesizini.
NgeSonto Izinyoni ezisendaweni yesithathu kwi-log, zizotholana neCape Town City koweligi eCape Town Stadium, ngo-3.30 ntambama.